I-Biliary Pancreatitis > Izinkinga zesifo sikashukela
I-Biliary Pancreatitis engapheli
Kaningi kunezinye izinhlobo zokuvuvukala kwamanyikwe, i-pancreatitis ebiliswa yi-biliary. I-pancreatitis ye-biliary yenzeka ngenxa yokuphulwa kokuphuma kwe-bile ngokusebenzisa ipheshana le-biliary. Ngenxa yalokhu, ukunyuka kwengcindezi kuma-ducts we-bile uma kuqhathaniswa nemicengezi yamanyikwe futhi i-bile iqala ukungena emigudwini yepancreatic. Ngenxa yokuvuselelwa kwe-bile, amaseli we-pancreatic alimala ngokuqala kokuvuvukala kanye nezehlakalo zokuwohloka. Ngokusho kwesifundo somtholampilo, i-pancreatitis ebambelela emndenini iyindlala futhi ihlala isikhathi eside.
I-biliary pancreatitis yisifo sokuwohloka esiwohlokayo se-pancreas esihambisana nezifo zohlelo lwe-biliary, okuholela ekunyukeni kwengcindezi emigudwini ye-bile nokungena kwe-bile emigungundwini yepancreatic.
Ukuhlaselwa okuqhamukayo kwenzeka ngenxa yezizathu ezifana ne-pancreatitis engapheli. Izinhloso ezaziwayo:
i-choleousstitis ebala ne-bile sludge (isibalo esincane ku-bile),
ukungalungiseki kwendlalifa yemicu ye-bile,
i-dyskinesia yemicu ye-bile,
ukuvuvukala kwemigqa ye-bile,
Izifo ze-duodenal papilla enkulu (i-dyskinesia ye-sphincter ye-Oddi, izinqubo zokuvuvukala, ukuhlasela, ukuba khona kwezidumbu zakwamanye amazwe noma izinqubo ze-volumetric kuyo),
i-cirrhosis namanye ama-pathologies wesibindi.
Kunezindlela zokukhulisa i-pancreatitis esekelwe kumdlavuza:
Ngenxa yezifo zohlelo lwe-biliary in the ducts bile, ukukhuphuka kwengcindezi, i-bile reflux eya emzileni wepancreatic kwenzeka.
Ukwanda kwengcindezi ye-bile ngenxa ye-pathologies ye-Vater papilla.
Ukulimazeka emiseleni ye-pancreatic ene-calculus (sludge) eyakhiwe emiseleni ye-bile.
Ukusakazeka kwama-ejenti athathelanayo kusuka ohlelweni lwe-biliary kuya ku-pancreatic (ngokunokwenzeka ngohlelo lokudonsa amanzi lwe-lymphatic).
Inqubo enkulu kakhulu ibonakala ngokuhlasela okukodwa kwalesi sifo okunezimpawu eziqine kakhulu nokuvela kwesimo esiphuthumayo. Ngemuva kokuhlaselwa, i-pancreatitis eyingozi kakhulu ye-biliary ihlala idlula ngaphandle komkhondo, bese kululama ngokugcwele.
Inqubo engapheli ibonakala ngenkambo efana ne-wave enezikhathi zokukhuphuka kanye nokukhishwa, ukuqhubeka okuqhubekayo kwezinguquko ze-pathological ku-gland.
Ukwehla kwesifo esingelapheki noma ukwenzeka kwesifo esibuhlungu kuvame ukwenzeka ngenxa yamaphutha okudla - ukudla kakhulu amafutha, okuthosiwe nokudla okunezipayisi ngosuku lwakusasa. Ukuhlaselwa kwe-pancreatitis kubonakaliswa yizimpawu:
I-Shingles ubuhlungu obukhulu e-epigastrium, okuningi ngakwesobunxele, okungapheli. Uma isiguli sine-pancreatitis engalapheki i-bancary, khona-ke ubuhlungu buyabuhlungu. Ngenqubo enkulu, aqinile, angabekezeleleki.
Umuzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza.
Izitulo ezikhululekile noma ukuqunjelwa.
Umuzwa wokufutheka olimini.
Amazinga kashukela egazini angakhuphuka noma anciphe ngenxa yokuphazamiseka ekukhiqizweni kwe-insulin neglucagon ngamangqamuzana endlala.
Lapho uhlola isiguli, izimpawu ze-biliary pancreatitis zizoba zinhle: izinhlungu eMayo-Robson, Desjardins, amaphuzu e-Shoffar, izimpawu zeVoskresensky (ukushoda kwamapulangwe palpation 5 amasentimitha edigonal kusuka enkabeni kuya kwesokunxele), isibonakaliso seRazdolsky (izinhlungu ngokuthepha esifundeni se-pancreatic) , Isibonakaliso sikaMondor (amabala ansomi emzimbeni wesiguli), uphawu lukaTuzhilin (ukuba khona kwesikhwehlela esikhunjeni).
Ngesikhathi sokuhlolwa kwesiguli, imininingwane ye-anamnestic iyaqoqwa (kukhona isifo se-bile duct ku-anamnesis), ukuhlolwa, i-palpation (ngokukhonjwa kwezimpawu ezingenhla), ukubonwa kanye nokuzizwa okuhle.
Ekuhlolweni kwebhubhoratri, kuhlolisiswa i-biochemical yegazi nomchamo ukuthola inani lama-enzyme (α-amylase, alkaline phosphatase), kuhlolwa igazi okwenziwa ukuthola izimpawu zokuvuvukala (amaprotheni e-C-reactive, leukocytosis, ukukhuphuka kwe-ESR nabanye), isilinganiso se-glucose egazini wengeze noma wehlise), yenza i-coprogram yokuhlola umsebenzi wama-enzymes wokugaya we-pancreas (inani lesitashi, imicu yemisipha engafakwanga, namafutha angathathi hlangothi angakhuphuka kuwo), futhi futhi ufunde i-fu imisebenzi yamapheshana wesibindi kanye nesibindi (nquma i-ALT, i-ACT, izingxenyana eziqondile nezingaqondile ze-bilirubin).
Phakathi kwezindlela ezisetshenziswayo, kusetshenziswa i-ultrasound yezitho zesisu (kulolu cwaningo, amatshe, ama-neoplasms kanye nama-parasites epheshaneni le-biliary, ushintsho kumanyikwe kanye nezimpawu ze-cirrhosis esibindini kungatholakala), i-ultrasound nayo ingenziwa kusetshenziswa imishini ye-endoscopic kusuka ku-duodenum kanye ducts yamathumbu. Kungenzeka futhi ukusebenzisa umcabango we-computed kanye ne-magnetic resonance imaging, i-cholangiography ngokuhlukile. Ukuhlola isimo sepilla enkulu ye-duodenal, kusetshenziswa ukuhlolwa kwe-endoscopic.
Uma kwenzeka isifo sihlaselwa ngamandla, kufanele ushayele i-ambulensi. Ngaphambi kokufika kwe-brigade, ukudla noma izidakamizwa akunconywa, ukuphumula kombhede kanye ne-compress ebandayo esifundeni se-pancreatic kuyadingeka.
Uma imbangela yalesi sifo ukuthi inyongo igcwele ngamatshe, kuzodingeka isuswe. Lapho kukhona i-calculi encane, amatshe angasuswa kusetshenziswa i-ultrasound. Futhi i-microscopic sludge ingaxazululwa ngamalungiselelo we-urodisoxycholic acid. Ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa futhi kusetshenziswa i-endoscope yama-pathologies ehlukahlukene e-duodenal papilla enkulu kanye ne-sphincter yase-Oddi.
Ukwelashwa okulimazayo kwe-pancreatitis e-biliary kubandakanya ukwelashwa kwezidakamizwa kanye nokudla. Ukwelashwa kufanele kunqunywe ngudokotela wakho, ukuzelapha ngokwakho kuyingozi empilweni nasempilweni.
Ezinsukwini zokuqala zokwanda kanye nokugula kakhulu, izimiso ziyabonakala: "kubanda, indlala nokuthula." Dinga ukuphumula kombhede, ukufakwa kwengcindezi engokomzwelo neyomzimba. Iziguli zikhonjiswa ukubuyisa inani lamanzi usebenzisa izixazululo zesaline ngaphakathi nangamaminerali angenawo carbonated ngaphakathi. Iziguli zinqunywe i-antispasmodics (i-no-spa, i-drotaverine), enciphisa izinhlungu, inciphise imijikelezo kwimigqa ye-bile ducts. Sebenzisa izidakamizwa ezinciphisa i-acidity esiswini (omeprazole, almagel, talcid).
Ukushintsha umsebenzi we-pocrreas, ama-enzyme amalungiselelo (i-creon, festal, mezim) ayasetshenziswa. Ngaphezu kwale mithi ezimweni ezinzima, kusetshenziswa i-heparin, i-diuretics, imithi elwa namagciwane.
Ukuze uvikele futhi welaphe lesi sifo, ukudla okuphathelene nepancreatitis ye-biliary kufanele kubhekwe ngokuqinile. Izinsuku ezintathu zokuqala, isiguli kufanele silambe futhi singaphuza kuphela uketshezi (namanje olungamanzi).
Ngemuva kwalokho kwethulwa inani elincane lokudla okunamafutha amancane, bese isiguli sishintsha kancane kancane siye ekudleni. isinkwa, ama-apula abhakwe nezithelo ezomisiwe, isobho semifino, ama-omeleette omusi, ama-compotes.
Ngama-pancreatitis athembele emndenini, ukudla okunamafutha, okuthosiwe kanye nezinongo, inyama ebhemayo, ukudla okunokuqukethwe okuphezulu kwe-caffeine, amaswidi ngaphandle kwama-bhisikidi omile, ama-marmalade nama-marshmallows, imifino emuncu nezithelo, ukudla okusheshayo akuvunyelwe.
Ukudla kwalesi sifo kufanele kube kaningi futhi kube ngokuxutshwa, ngezingxenye ezincane.
Kunezinye izindlela zokwelapha lesi sifo - ukusetshenziswa kwama-decoctions ahlukahlukene (i-dogrose, i-chamomile, i-calendula, i-oats), ama-tincture (i-draris, amadevu wegolide), nezinye izindlela zokupheka. Khumbula, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinjalo kuvunyelwe kuphela enkambweni yesikhathi eside yesifo ngemuva kokubonisana nodokotela kwangaphambilini. Ukuzelapha kungalimaza.
Ngomsuka we-pancreatitis oyisisekelo we-pancreatitis, kuyadingeka ukwelapha izimbangela eziphambili ngesikhathi - izifo ze-biliary tract. Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo kusiza ekudleni okufanele, kulondolozwe indlela yokuphila enempilo yokwenqaba utshwala, okuthinta kabi isibindi ngama-bile ducts kanye namanyikwe.
I-pancreatitis yisimo esibi esivame ukuholela ezinkingeni nasekufeni. Kwezinkinga zesifo, kukhona: ukungakwaneli kwezinhlelo zomzimba ezahlukahlukene (i-hepatic, renal ,phefumula nezinye), izimo zokushaqeka, ukubonakala kwe-necrosis noma ukwakheka kwe-abscess kumanyikwe, ama-cysts. Ngokwelashwa okufika ngesikhathi, kufaka phakathi ukuhlinzwa, kungenzeka ukugwema imiphumela emibi. Funa usizo kusibonakaliso sokuqala sokugula.
Kubantu abaningi, i-pancreas iqala ukwehluleka, ukuvuvukala kwayo kwenzeka, okwenzeka ngenxa yokwephulwa kokukhishwa kwe-bile. I-Biliary pancreatitis iyakhula, evame ukuthinta abantu abadala. Lesi sifo siyelapheka, kepha sinaka ukunakekelwa okufika ngesikhathi kwezokwelapha kanye nokuhambisana nazo zonke izidingo ezidingekayo. Ngenxa yokwelashwa okusebenzayo kwama-pancreas, isiguli sibuyele ngokushesha endleleni yaso evamile yokuphila.
I-biliary pancreatitis yenzeka ngesifo se-gallstone. Ukhula njengomphumela wokuphonsa uketshezi emigodini ye-pancreatic, obangela ukuvuvukala. Le nqubo ikhombisa ukungasebenzi kahle gallbladder.
Kumuntu ophile kahle, ingcindezi emihumeni yalesi sitho iphansi kakhulu kunezinga lokucindezelwa emigudwini yamanyikwe. Ukunyuka kwayo kukhombisa ukwenzeka kwesithiyo esingavumeli i-bile ukuthi yenze kahle okwayo. Lokhu kungahle kube ngenxa yokuvinjwa kweziqubu, kaningi ngamatshe. Konke lokhu kuholela ekuphonsweni kukamanzi kumanyikwe.
Le pathology ingenzeka ngezizathu ezahlukahlukene. Cabanga okubaluleke kakhulu.
Uma umuntu enesifo i-gallstone, imvamisa nalesi sifo sokugaya ukudla siqala ukujuluka ngenxa yokugoqeka kwama ducts ngamatshe. Konke lokhu kuholela ekwandeni kwengcindezi ngalezi zindlela, okunomthelela ekujovweni koketshezi kumanyikwe.
Nge-cholecystitis, inqubo yokuvuvukala yenzeka ebusweni be-gallbladder, ivimbela ujusi ukuthi unggelezi ngokujwayelekile.
Ikhuthaza ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis ye-biliary kanye ne-cholangitis, okuyisibeletho esingavinjelwanga semibele evele ngenxa yokuphazamiseka kwe-bile duct kanye nokutheleleka kokukhululwa.
Izifo ezingenhla zihlanganiswa ne-pancreatitis ye-biliary zibangela izinguquko ezilandelayo kumanyikwe:
ukwanda kwamaseli e-tishu atholakalayo,
ukwephulwa emsebenzini wakhe.
Kodwa hhayi lezi zimbangela kuphela ezinegalelo ekuqaleni kwalesi sifo. Ukuhlaselwa kuvame ukwenzeka phakathi kwabathandi bokudla okuhle. Ukudla okunjalo kungasebenza njengohlobo lwe-provocateur of spasms of the gallbladder futhi kunomthelela ekuqumbeni kwamanyikwe. Ngaphezu kwalokho, i-pancreatitis iba ngenxa yokudla ngokweqile, ukudla okudala noma ukudla.
Ngabe isifo siqhubeka kanjani?
I-pancreatitis ye-biliary ingaba nefomu elingamahlalakhona futhi elinamandla. Lokhu kuvela ngokusetshenziswa kokudla okunjalo, okuvusa zonke izinqubo zokugaya. Kungaba ngamaphayi inyama okuthosiwe, iziphuzo ezinekhabhoni, ukudla okulula ngomlomo, inyama ethosiwe.
Ukudla okunje akukaze kubhekwe njengokuphilile, ngoba kukhuthaza ukuhamba kwamatshe okungavala imisele emgodini wegallbladder. Iziguli ezinenkambo engapheli yesifo, zibona ukumelana kokudla kwazo, zingavimba ukuvela kwe-pancreatitis enesibindi.
Inkambo ye-biliary pathology incike esenzweni samatshe akhiwe kwi-bile duct. Uma emincane ngosayizi futhi edlulela kahle kuyi-duodenum, lapho-ke isimo sesiguli sithuthuka ngokushesha. Uma ukuhamba kwamatshe eceleni kwe-duct kunzima, khona-ke kulokhu umuntu angayesaba impilo yesiguli.
Izimpawu ze-Biliary Pancreatitis
Izimpawu zalesi sifo, ikakhulukazi ngokumelene nesizinda sokuqina kwe-bile, zihlukahlukene kakhulu, ngakho-ke, i-pathology okunjalo kunzima ukuyithola.
Ngakho-ke, uma isiguli sine-pancreatitis ye-biliary, izimpawu zayo zingalandela:
Ukuvela kweminjunju ebuhlungu kuyo yonke indawo yesisu, engenza ngemuva noma kwi-hypochondrium. Imvamisa, izinhlungu zenzeka ngemuva kokudla ukudla okunamafutha, okuthosiwe noma okubhemayo. Ukuqiniswa kwayo kwenzeka ebusuku noma amahora amabili ngemuva kokudla.
Ukunambitheka okubabayo okuqhubekayo emgodini womlomo.
Isifo sohudo, ukuqunjelwa, noma ukuthopha.
Ukushisa komzimba kungakhuphuka kancane.
I-putereat pilireat pilireatment ibonakala ngeminjunju ebukhali e-hypochondrium, okuvela ngenxa yemisipha ebushelelezi yemisipha evusa itshe, kanye nokulimala okungapheli - kwesifo sobuhlungu obuhlala isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, ngesimo esingapheli sesi sifo, izimpawu ze-jaundice zingenzeka, ngoba izindunduma ze-bile azikwazi ukudlula futhi ujusi wokugaya ungena ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Kulokhu, abelungu bamehlo nesikhumba siphenduka siphuzi. Kulokhu, ukwelashwa kufanele kuqale ngokushesha, ngoba konke kungaphela kabuhlungu.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ye-biliary kwenziwa ngaphansi kokubhekwa kwe-gastroenterologist, i-endoscopist nodokotela ohlinzayo. Ukuthi lesi sifo asiqhubeki phambili, futhi futhi ukuvikela ukwanda, lesi sifo esingaphansi siyelashwa.
Uma i-pathology engamahlalakhona isiphenduke i-pancreatitis ebaluleke kakhulu, ukwelashwa kufanele kwenziwe kuphela esibhedlela. Ifomu elibi liphathwa ngokuphelele, kusetshenziswa umuthi wokwelapha izidakamizwa kanye nokudla kokudla.
I-pancreatitis ye-biliary esigabeni esibuhlungu iqhubeka nesifo esinamandla sobuhlungu, esisuswa ngosizo lwe-analgesics kanye ne-antispasmodics. Futhi, ukulungiswa komsebenzi oyimfihlo wangaphakathi nangaphandle we-pancreas kuyenziwa, ukukhipha izidakamizwa, ukuvimbela izinkinga ezithathelwanayo kwenziwa ngosizo lwama-antibiotics.
Ngokukhula ngokweqile ezinsukwini ezintathu zokuqala, ukuzila ukudla nokwelashwa kwamanzi angenawo amakhabhoni e-alkaline kuyadingeka. Ngemuva kokuthi ukudla sekuphinde kwaqalwa, amafutha anqunyelwe ekudleni, ama-carbohydrate nawo kufanele alawulwe.
Ukunciphisa umphumela obhubhisayo wama-enzymes we-pancreatic ocushiwe, i-somatostatin, ama-protein inhibitors, ama-proton pump inhibitors anqunyelwe. Udokotela angaphinde anqume ama-enzyme angama-microsherical asiza ukubuyisela ukungasebenzi kahle kwe-pancreatic enzymatic. Ukuze ushukela wegazi ubuyele kokujwayelekile, izidakamizwa ezinciphisa ushukela zinqunyelwe.
Lapho ukuhlaselwa okukukhulu kususiwe, udokotela ohambelayo angaphakamisa ukuhlinzwa ukuze asuse amatshe. Kwenziwa ngezindlela ezimbili: basika udonga olungaphezulu lwesisu (i-laparotomy) noma bakha izikhonkwane ezimbili ezincane odongeni lwesisu (laparoscopy).
Uma i-pancreatitis ye-biliary iphathwa kahle, isiguli sizobuyela ngokushesha kwindlela yaso ejwayelekile yokuphila. Ngesifo esithuthukile, amatshe angangena emiseleni ye-bile. Uma lesi sifo sishiywa inhlanhla futhi kungenziwa, khona-ke lokhu kuzoholela ekuwohlokeni kwendlela yomgudu wesisu. Njalo lapho izinhlungu ziyoqina kuphela, ikakhulukazi ngemuva kokudla ukudla okungenamsoco.
Ngaphezu kwalokho, isifo esisebenzayo singangena ku-parenchymal pancreatitis.Lokhu kungasongela isiguli ngalokhu okulandelayo:
ukwelashwa okuhlala isikhathi eside esibhedlela
isikhathi sokwelashwa kabusha,
Ukudla okuqine kakhulu cishe impilo yami yonke.
Ukuvimbela ukuvela kwe-pancreatitis enamabala, kubalulekile ukugcina indlela yokuphila enempilo, udle ngokulungile futhi ubushiye ngokuphelele utshwala.
Uma i-pancreatitis ye-biliary ivela, ekudleni kumele kube okunengqondo. Emini, isiguli kufanele sidle izikhathi ezi-4-5, kuyilapho umthamo wokukhonzelwa owodwa kufanele ungabi ngaphezu kwama-250 ml. Ukudla okubhemile, okuthosiwe nokunamafutha akuvunyelwe ngokuphelele.
Ngesikhathi sokudla, inani lamaprotheni kufanele lenyuswe ngamaphesenti angama-25. Ngakho-ke, isiguli kufanele sidle ama-120 g wemikhiqizo yamaprotheni ngosuku. Kepha inani lamafutha, ngokuphambene nalokho, kufanele lehliswe ngo-20%, kuthi phakathi nosuku lapho ukudla kwabo kungafanele kudlule ama-80 g. Ukudla ama-carbohydrate nakho kufanele kwehliswe, futhi kufanele kube ngama-350 g ngosuku. Inani ushukela Kunconywa ukuba ancishiswe izikhathi 2 kusuka esimweni esidingekayo.
I-biliary pancreatitis engapheli (ikakhulukazi ifomu elinamandla) yisifo esibi kakhulu. Kubalulekile ukukuthola kahle lokhu i-pathology bese uqala ukwelashwa ngendlela esheshayo, ngoba ukubanjwa kwemfuyo kuzoqhubeka ukwanda kakhulu, kubangele ukuhlupheka okuningi. Ukuqeda i-pancreatitis yangaphambilini kusiza kuphela ukuhlinzwa.
Zonke izitho zomgudu wesisu zixhunyaniswe ngokusondelana, futhi i-pancreatitis ye-bili ibonisa ngokucacile lobu budlelwano.
Ukwelashwa kwanoma yiluphi uhlobo lwe-pancreatitis kunzima, ikakhulukazi ngenxa yobunzima bokuxilongwa. Kodwa-ke, ukwelashwa okungazelelwe kugqame ngokulahleka kwesitho nokufa kwesitho somzimba.
Ukugaya inqubo eyinkimbinkimbi lapho isisu singabalulekanga ngaphezu kwamathumbu noma isibindi - ama-pancreas.
Ngaphandle kwanoma yiziphi lezi zitho, ukugaya okujwayelekile kokudla futhi, ngakho-ke, impilo ephelele ayinakwenzeka.
Ama-pancreas empeleni awatholakali ngaphansi kwesisu, njengoba kungakhishwa egameni lakhe, kepha ngemuva kwalo.
Igama lesitho lalitholwa esandleni sokukhanya kwama-anatomists abafunda ukwakheka komzimba womuntu phezu kwezidumbu ezikhundleni eziphakeme.
Ubungako obuncane besitho, okufika kumasentimitha ayi-10, bungadukisa maqondana neqhaza laso elikhulu.
Okokuqala, ingxenye esemqoka yama-enzymes adingekayo ekuqhekekeni kwamafutha, amaprotheni kanye ne-carbohydrate ikhiqizwa ama-pancreas.
La ma-enzyme ashukela we-pancreatic angena kwi-duodenum - indawo yokusebenzela esemqoka yokuhlanza amafutha, amaprotheni nama-carbohydrate ekudleni.
Ama-bicarbonate ion ku-pancreatic juice enza ukuthi i-sulfuric acid ibe semngceleni phakathi kwesisu ne-duodenum, isiza ukugcina indawo ene-alkaline ekugcineni.
Ukuze ugweme imiphumela yama-enzyme ezicutshini ze-gland, zisebenza kuphela ku-duodenum.
I-pancreatitis ebukhali yisimo sokuhlinzwa kwangaphambi kwesikhathi kwama-enzyme egazini, okuholela ekuzijwayekeni kwesitho.
Kanye nokudakwa, inqubo ye-pathological isakazekela kwezinye izitho ezibalulekile: inhliziyo, ubuchopho, amaphaphu, izinso nesibindi, empeleni kuwushevu wonke umzimba.
Lesi yisimo esisongela impilo, futhi uma ukwelashwa okufanele kungenziwa ngesikhathi, khona-ke kusongela ukufa kwesitho nomzimba wonke.
Izizathu ezahlukahlukene zingaholela ekwakhiweni kwe-pancreatic pathology. Okuvame kakhulu okwamanje ngotshwala, obangela u-70% wayo yonke i-pancreatitis.
Lesi sifo singakhula ngenxa yemiphumela emibi yezidakamizwa ezahlukahlukene, siqhamuke ngenxa yokulimala, ngokwesibonelo, lapho senziwa izinqubo ezahlukahlukene zokuxilonga.
Ama-pancreas angashiswa ngenxa ye-pathology yezinye izitho, imvamisa gallbladder.
I-pancreatitis ehambisana ne-cholelithiasis ibizwa ngokuthi i-biliary, okungukuthi, i-biliary, ehambisana nesibindi.
I-pancreatitis yemvelaphi yebhiliary
I-pilireat pancreatitis iba ngumphumela we-bile we-bile ungene kuma-pancreatic ducts, ophazamisa ukusebenza okujwayelekile komzimba futhi ucasule ukuthuthukiswa kwezinqubo ze-pathological kuwo.
I-biliary pancreatitis ingaba yingozi futhi ihlala isikhathi eside.
Kulula ukucabanga ukuthi ukwanda kwe-pancreatitis engapheli kunemigomo efanayo ne-pancreatitis eyingozi, kepha lezi yizimo ezihluke ngokuphelele.
Kodwa-ke, i-pancreatitis ebukhali ingakhula phakathi kwezinkinga ezingamahlalakhona ne-gland.
I-pilireat pancreatitis iyi-complication yesifo esisodwa se-gallbladder:
i-cholecystitis ihambisana ne-edema kanye nokwephula ukuphuma kwe-bile,
amatshe asenyongeni avimbela ukuhamba kwe-bile emigodini ye-bile futhi abangele ukuqina. Ngenxa yalokhu, ingcindezi ye-intrapancreatic iyanda, futhi i-bile ingena kumanyikwe,
i-cholangitis - ukuvuvukala emiseleni ye-bile lapho ubunikazi bayo buchaphazeleka, futhi i-bile ithelelekile.
Izimpawu ezingama-Nonspecific zingenye zezimpawu ezenza kube nzima ukuthola ngokunembile i-pancreatitis:
Izimpawu ezithile ze-pancreatitis zibonisa ezinye izifo ezithile zepheshana esiswini,
izimpawu ezithile zingaba khona noma zingekho esithombeni somtholampilo we-pancreatitis,
noma ngabe izimpawu ze-pancreatitis zikhombisa ukuvuvukala kumanyikwe, azikwazi ukusiza ekuboneni izimbangela zayo, kufaka phakathi i-cholecystitis, i-cystic fibrosis, i-trauma nabanye abaningi.
Izimpawu ze-pancreatitis Ubuhlungu besisu, imvamisa ezungeze i-hypochondrium, zinganikezwa emuva. Isiguli singazizwa sigula futhi sibe nokunambitheka kwe-bile emlonyeni wakhe.
Ukuqedwa kokuqukethwe kwe-duodenal akulethi ukukhululeka. I-pancreatitis ebabayo futhi engamahlalakhona (esigabeni esibi) i-pancreatitis iqala ngokubhekela emuva kokuphazamiseka ebhalini le-electrolyte ebangelwa ukuphalaza okukhulu nokudakwa. Ukuhudula noma ukuqunjelwa kungenzeka.
Izimpawu zingafaka ukulimala ohlangothini lwesisu, kwesinye isikhathi i-tinge ephuzi. AmaBruises nawo angavela endaweni yenkaba.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ye-biliary kuncike ekujuleni kobunzima. Ukudla yisimo esibaluleke kakhulu sokuthuthukisa isimo sesiguli.
Ubukhulu bayo buxhomeke esimweni samanje se-gallbladder namanyikwe.
Njengokudla, ukwelashwa kuyahluka ngokuya ngesimo sezitho zomzimba, okuqinisekiswe ngosizo lwamasu athile wokuxilonga, hhayi nje “ngamehlo” asuselwa kwizikhalazo.
Izindlela ezahlukahlukene zokuxilongwa nokwelashwa
I-pancreatitis, ikakhulukazi engalapheki, ingaqhathaniswa necala eliyinkimbinkimbi futhi eliyinkimbinkimbi lapho kunzima khona ukuthola imbangela nomphumela.
Akubona bonke odokotela abangabaphenyi abanekhono lokunquma ukutholakala kwesifo okuso.
Lowo nje umuthi - hhayi ukusesha kweselelesi, amacala awavalwa kakhulu ngenxa yokuntuleka kobufakazi - udokotela kumele aqinisekise ubuchwepheshe ngokuxilongwa.
Uma kunezikhalazo ezivela kumanyikwe, ke i-pancreatitis, kufaka ne-biliary pancreatitis, kuvame ukuba yisifo esinjalo.
Ukulandela ukuxilongwa, ukwelashwa kunqunyelwe, futhi kuhle uma kungukudla nje, ngoba ukudla okunempilo, noma kungenxa yokuxilongwa okwenziwe ngaphandle kwezizathu ezifanele, akunakubangela ukulimala.
Kodwa-ke, ukwelashwa, ikakhulukazi uma iziguli zingane noma abesifazane abakhulelwe, kuvame ukuholela emiphumeleni emibi futhi ebuhlungu impela.
Noma yikuphi ukugula okungathi sína ebuntwaneni empeleni kuhambisana ne-lag ebalulekile ekukhuleni komzimba ukuphakama nesisindo.
Ukwazi lokhu, odokotela bavame ukuxilonga i-pancreatitis engapheli noma eyingozi ezinganeni ezinokukhula okujwayelekile.
Ukwelashwa, noma ukuhlala endaweni ehlala njalo phakathi kwabantu abagulayo, okokuqala, kuvusa ukugula kwengqondo, futhi okwesibili, kubangela ukuthi ingane ikhule ngaphansi kwethonya lokuya esibhedlela, okuthinta kakhulu ukuzethemba kwakhe nobuntu bakhe njengomuntu osemdala.
Ukwehla kwesikhumba esidala okungama-pancreatitis kwabesifazane abakhulelwe kuvame ukuholela ekuqedeni ukukhulelwa, kepha ngenkathi "kophenyo" lomuntu ngamunye onjalo, ezinye iziphambeko zivame ukutholakala ngaphandle kwama-pancreas.
Odokotela emazweni anomuthi osezingeni eliphakeme akuvamile ukuthola i-pancreatitis engapheli, bakholelwa ukuthi kukho konke ukwanda kwezinqubo zokuvuvukala kumanyikwe kunesizathu esithile esiqondile esidinga ukutholakala futhi kungenzeka siqedwe.
Konke lokhu kwalotshelwa ukungadeleli odokotela basekhaya, okukhona phakathi kwabo ochwepheshe abaningi abanekhono futhi abanomthwalo wemfanelo, kodwa ukwenza iziguli zenze ukuthi umthwalo wemfanelo wempilo yazo ulapha ngokwazo.
Ngaphambi kokuvuma noma yikuphi ukwelashwa, kufanele uqiniseke ukuthi kwakuyi-pancreatitis yebhiliyali eyadala izinkinga zempilo.
Ukulawula odokotela ngaphandle kwemfundo ekhethekile akuwona neze umsebenzi olula, kepha kungenzeka.
Ukubonisana nabanye ochwepheshe, ukutadisha izincwadi zezokwelapha ezikhona, kubandakanya nocwaningo lwakamuva, ukubuza udokotela imibuzo efanele - kunezindlela eziningi, kepha zenzelwe labo bantu abangathembeli kuleli cala ezindabeni zempilo yabo.
Kuyini i-pancreatitis ye-biliary
Lolu hlobo lwe-pancreatic pancreatic lesion, olunekhodi yamangqamuzana ayi-10 amakhemikhali ayi-10 K85.1, yisifo sesibili esinenkambo yokuvuvukala futhi sakhiwa ngokumelene nesizinda sesifo esiyinhloko esiqhubekayo. Ama-pathologies ayisisekelo asendaweni ikakhulukazi esifundeni sesibindi, i-gallder noma ama-bile ducts.
Isikhathi eside sezifundo ze-pathologies eziyinhloko zinegalelo ekwandiseni amathuba okuba nesifo esifana ne-pancreatitis engapheli yomdlavuza, futhi ezimweni eziningi, ukuthuthukiswa kwalesi sifo kusizwa yi-cholelithiasis ngokubakhona kwamatshe amancanyana emgodini we-gallbladder.
Izimbangela kanye nezinqubo zokukhula kwalesi sifo
Izizathu eziyinhloko ezifaka isandla ekuthuthukiseni i-pancreatitis engapheli yomdlavuza okuhlala kuyo ukuthuthukiswa kwezifo eziyinhloko ze-pathological:
isifo se-gallstone, kanye ne-biliary sludge, ebonakala njengokuqina kwe-bile ngokwakhiwa kwe-precipitate ngendlela yokubala kwe-microscopic,
ukungasebenzi kahle kwendalo ye-bile duct
ukuqhubeka kwe-cholecystitis engapheli,
ukungapheleli kwe-hepatic exocrine,
ukuvela kwe-dyskinesia ye-bile duct noma i-gallder,
i-cystic lesion ye-bile duct (i-choledochus), enomthelela ekususweni kwe-bile kusuka emgodini wegallbladder ne-hepatic duct,
i-cholestasis ecgestive, ebonakala njengokuqina kwe-bile,
ukwephulwa kwe-pathological kokusebenza kwengono yeVater, eqinisekisa ukungena kwe-bile emgodini we-duodenum 12.
Umthelela ongemuhle wokuthuthukiswa kwe-pathologies engenhla ngesikhathi kusungulwa inqubo ye-biliary pancreatic in the parenchymal gland icasisa ukuthuthukiswa kwezifo ezilandelayo ze-pathological:
Ukuvela kwenqubo yokuvuvukala,
ukwephula ubuqotho nokusebenza kwesakhiwo se-pancreas,
ukwenza kusebenze kwezinqubo zokuwohloka,
ukuthuthukiswa kokuchuma kwezicubu ezithintekayo.
Izimpawu nokubonakaliswa kwefomu le-biliary pancreatitis
Le nqubo ye-pathological in the pancreatic cavity ingaba nezindlela ezimbili zokuthuthuka - ezingamahlalakhona futhi zibuhlungu. I-putereat pilireat pilireatment inomtholampilo ofanayo onokwanda kwe-pancreatitis ye-biliary engapheli, futhi inezimpawu ezijwayelekile zepancreatic, phakathi kwazo okukhona:
izinhlungu zasendaweni esifundeni se-hypochondrium yangakwesobunxele enesici se-herpes zoster,
Isicanucanu esivamile ngokuhlanza okukhulu
ukukhuphuka kokushisa komzimba emingceleni ye-subfebrile nangaphezulu,
imivimbo ecteric esikhunjeni,
ukwenzeka kokuqunjelwa, isifo sohudo kanye nokuthuthukiswa kokwenza igesi.
I-pancreatitis engapheli ye-biliary ne-remission engazinzile inesibonakaliso sezimpawu ezijwayelekile eziphawulekayo:
ukuhamba kokuhlanza kusizinda sobuhlungu, okubangelwa ukwephulwa kokudla,
indlela yokuqunjelwa noma isifo sohudo,
umkhuhlane wemingcele ye-subfebrile.
Kodwa, ngaphandle kokufana okuningi kwe-biliary pancreatitis nezinye izinhlobo zalesi sifo, le ndlela yokusebenza inezimpawu zayo:
Ukuvela kokuzwa kobuhlungu esiswini kubangelwa ukusetshenziswa kwemithi nge-choleretic spectrum yesenzo, kanye nokudla okunomphumela ofanayo.
Ukuhlaselwa kobuhlungu bude kakhulu kunezinye izinhlobo zesifo se-gland.
Uhlobo lwebhiliary lwalesi sifo lubonakala ngokuthi ngesikhathi sokukhula kwalo ezimweni eziningi amafomu ama-paresis esifundeni samathumbu, okungukuthi, ukuqunjelwa kuba khona, kanti ezinye izinhlobo zesifo zivusa ukuthuthukiswa kwesifo sohudo.
Ubuhlungu bubonakaliswa ikakhulukazi yizimpawu zezimpawu zesimo sokuthuthukiswa kwe-biliary colic, kubonakaliswa kwi-hypochondrium ngakwesokudla hhayi ngakwesobunxele.
Yindlela yokuphilisana yesifo se-pancreatic esivame ukwenzeka ngokuhlangana nentuthuko ye-jaundice.
Kaningi, phakathi kwezikhalazo zeziguli, kubukeka sengathi kuqubuka i-aftertaste ebabayo, kanye nokuvela kokudinwa komgogodla womlomo.
Ukuxilongwa kokuqala kwenziwa esigabeni sokuhlolwa kokubonakalayo kwesiguli, umlando wokuthatha kanye ne-palpation ye-peritoneal patity.
Ukwenza ukuxilongwa kokugcina, udokotela oqondayo uyalela isiguli ukuthi senze lezi zinqubo ezengeziwe zokuxilonga:
ukuhlolwa kwegazi kwesifundo se-biochemical, lapho kutholakala khona ukuqina kwe-transamylase,
ukuhlolwa kwegazi kokuhlolwa okujwayelekile kwemitholampilo kunqunyelwe kuphela i-pathology eyingozi,
ukwenza i-cholangiopancreatography usebenzisa i-Medi Medium,
Emazingeni okuqala okuthuthuka kwe-pathology nasebusweni ngamatshe amancane kakhulu ku-gallbladder, ukwelashwa kwefomu le-pilireatitis ye-biliary kunganikeza imiphumela emihle lapho usebenzisa imithi. Ukuthola ngempumelelo i-prognosis enhle yomlando wezokwelapha, ukwelashwa kwe-litholytic kunqunyelwe, ngokusebenzisa i-Ursosan noma i-Ursofak, okufaka isandla ekuchithweni kwamadiphozi anjengetshe. Lokhu kwelashwa kwenziwa lapho kungekho khona ukungqubuzana ngesimo sokuqhekeka kwipheshana le-biliary, ukuba khona kwamatshe e-calcium ne-pigment, kanye nangemva kwezinqubo zokuxilonga ngesimo se-CT, i-ultrasound ne-cholecystography, enikeza imininingwane ngobuningi nokwakheka kwe-calculi. Amatshe wohlobo lwe-cholesterol alula ukuwaqeda.
Enye yezindlela zesimanjemanje zokwelashwa okuqinayo kwe-biliary pancreatitis is extracorporeal shock wave therapy, evumela amatshe okuchoboza esebenzisa amaza e-ultrasonic.
Ukuhlinzwa kwe-pancreatitis ye-biliary
Isidingo sokuhlinzwa sivela kulezi zimo ezilandelayo:
Ngefomu elithuthukile le-cholelithiasis, lapho usayizi wamatshe owakhiwe awakwazi ukuchobozwa yi-ESWL, futhi uvimbe ngokuphelele izindunduma ze-bile, ungavumeli i-bile ukuthi ingene emgodleni wamathumbu. Lolu hlobo lokuhlinzwa lwenziwa njenge-cholecystectomy.
Ngokuthuthukiswa kwe-adenoma, kwasendaweni endaweni yengono yeVater.
Enye inkomba yokuhlinzwa ukuhlinzwa kwe-cicatricial, noma ukuqina.
Ezimweni eziningi, odokotela abahlinzayo basebenza ngokuhlinzwa okuxakayo besebenzisa ukuhlukunyezwa okumbalwa okuncane nezinsimbi ezincane kanye nekhamera ekhethekile. Kodwa, ezimweni ezinzima, ukukhetha kunikezwa ukungenelela kwe-laparatomic evulekile.
Ngaphambi kokuhlinzwa, isiguli sinqunywa inkambo yokwelashwa ehlanganisa ukusetshenziswa komuthi olwa namagciwane i-Racef, esiza ukuvikela ukutheleleka esikhathini sokusebenza.
Izindlela zabantu zokulwa nalesi sifo
Ngemuva kokuthi i-pathogenesis yesifo se-pancreatic isifo esisekela singene esigabeni sokuxolelwa okuqhubekayo, kunconyelwa ukusebenzisa amanye amakhambi okwelapha asuselwa kumakhambi okwelapha ukuvimbela ukwanda kwawo okuphindayo. Ukusuka ku-dieelle, umhlonyane obabayo, i-calendula, i-dill, i-yarrow, njll., Kunconyelwa ukwenza ukumiliselwa, ama-decoctions bese ubabamba ngendlela yetiyi.
Ukulungiswa kokudla okunempilo kanye nokudla okungunombolo 5 kuwusizo olukhulu olusendleleni yokululama ngempumelelo. Konke ukudla okusetshenzisiwe kufanele kube nomphumela ozuzisa kakhulu esithweni esithintekile futhi kungacasuli izingqimba ze-mucous zendlela yokugaya ukudla. Ngakho-ke, izondlamzimba kufanele zibe nokulinganisela futhi zixutshwe. Ukukhishwa kufanele kube:
utshwala neziphuzo ze-carbonated,
izinongo ezinoshukela nokudla okunamaphesenti amaningi wokuqukethwe kwamafutha,
izithelo ezinambithi omuncu kanye nezithelo zom berry,
itiye elinamandla neziphuzo zekhofi.
Ukudla kwamafutha nokudla kwe-carbohydrate kumele kuncishiswe, kepha ukudla kwamaprotheni kufanele kuvame ekudleni kwansuku zonke.
Ukwelashwa okuqale ngesikhathi esifanele i-pathology, ukuhambisana nazo zonke izincomo zikadokotela ohambelayo kanye nokunamathela ngokuqinile ekudleni kuzonikeza i-prognosis enhle yokubuyiselwa kwezitho ezonakele zepheshana lesisu. Ezimweni ezisezingeni eliphakeme, amandla amahle okwelashwa angatholakala, mhlawumbe, kuphela ngemuva kokuhlinzwa.
2. I-pancreatitis engapheli yesibeletho
Uhlobo olungamahlalakhona lwe-PD lubonakala ngenkambo ende (isibonakaliso se-pathology ephikelela okungenani izinyanga eziyisithupha). Inqubo yokuvuvukala icasulwa izifo zeziqu ze-bile. Umphumela we-pathology ukulahleka okuyingxenye noma okuphelele kokusebenza kwe-hormone-excreting nomsebenzi we-enzymatic wamanyikwe. Uhlobo olungamahlalakhona lwe-PD luhambisana nokuqunjelwa okujwayelekile noma isifo sohudo, izinhlungu, ukuncipha kwesisindo kanye nokuntuleka kokudla, kanye nokuphaphama kwesikhumba.
3. I-pancreatitis eyingozi kakhulu ye-biliary
Isimo esibi se-PD sikhula ngemuva kwesisekelo senqubo yokuvuvukala esepheshaneni le-biliary. Ingozi yokuhlaselwa yingozi enkulu yokufa kwesiguli uma kungekho ukunakekelwa kwezokwelashwa okufika ngesikhathi. I-PD acute iboniswa ngesimo sezimpawu ezibuhlungu obukhulu, ukugabha okungenakugwenywa (ikakhulukazi ebusuku), ukuqina komzimba kwesikhumba, ukuqunjelwa noma isifo sohudo. Ngemuva kwesikhathi sokuxolelwa, ukubanjwa okuphindaphindekayo kungenzeka.
(A) ukuphazamiseka kwe-gallstone komgodi we-pancreatic. (B) Umbono ka-Opieh wesiteshi esivamile. (B) ukuba khona kokuvinjezelwa kwayo yomibili imisele nge-gallstone ngaphandle kwe-bile reflux ku-pancreatic duct.
I-Bile ekhiqizwa yisibindi nokuqongelela gallbladder iyadingeka ukuze kuqinisekiswe ukugaya ukudla. Esimweni esijwayelekile, into idlula phakathi kwe-bile ducts kwi-duodenum. Ngokushintshwa kwe-pathological, i-bile iphonswa emgodini wepancreas. Isitho siqala ukugaya izicubu zazo. Le nqubo iholela ekubhujisweni kwama-pancreas. Umphumela ukuthuthukiswa kwe-biliary pancreatitis.
Ukuthuthukiswa kwe-PD kungadalwa yizici ezilandelayo:
ushintsho lwe-pathological ekwakhiweni nasezakhiweni ze-bile,
i-dyskinesia ye-bile duct noma i-gallder,
ubunzima bezinkinga zesibindi,
ukumunca kwama-microorganisms we-pathogenic ku-bile ngenxa yenqubo yokuvuvukala ezithweni ezingomakhelwane,
ukuphathwa okungalawulwa kwezidakamizwa ze-choleretic,
ukuthuthukiswa kwezinqubo zokuvuvukala emiseleni ye-bile kanye nesinye senyongo,
i-pathology ye-papilla enkulu ye-duodenal,
ukuqhubeka kokuntuleka kwe-hepatic exocrine,
ukulimala kwemisipha ye-pancreatic nge-calculi,
ukwakhiwa kwamatshe emiseleni ye-bile noma kwesinye isigaxa senyongo,
ubukhona ekudleni kwenani elikhulu lemikhiqizo ngesenzo se-choleretic,
imiphumela ye-cholecystitis engapheli,
isifo se-biliary sludge nesifo se-gallstone,
ukungasebenzi kahle kwendlela yomthambo.
Isibonakaliso esiyinhloko se-biliary pancreatitis Ubuhlungu. Ukudalwa kwasendaweni kobuhlungu kungenzeka e-hypochondrium yesobunxele noma kwesokudla. Ukuhlaselwa kufana nokuncanyana kwesikhashana noma kuvamile ngokwemvelo. Isizathu esidabisayo sobuhlungu bezinhlungu ukusetshenziswa kwezigaba ezithile zokudla (isibonelo, usawoti, isipayisi, ukudla okunamafutha noma okuthosiwe).
Ezinye izinkomba ze-PD zingahluka ngokuya esigabeni sesifo kanye nesimo esivamile sohlelo lokugaya ukudla.
Izimpawu ezinkulu yilezi:
Isici esibeka engcupheni sokuqanjwa kwesimo sebhiliary salesi sifo sidlondlobala ngokweqile. ukuthakazelelwa kwesikhumba kanye nesifo sohudo,
izindlela zokuhlanza zihlanganiswa kanye nobuhlungu bezinhlungu zangaphakathi ezithweni zokugaya,
isifiso esijwayelekile sokuwohloka (izitofu ezikhululekile, izinhlayiya zokudla okungaphanjwanga kungenzeka kube khona ezindlini),
usizi esiswini (ngobuhlungu obujwayelekile)
ukuntuleka kokudla (umphumela ongenakugwenywa wophawu ukwehla kwesisindo somzimba),
ukukhala njalo kwe-nausea nokuhlanza okungapheli,
ubuthakathaka obujwayelekile bomzimba nokukhathala ngokweqile.
Izici ezihlukanisayo ze-BP umuzwa wokukhathazeka emlonyeni (noma ukulunywa umunyu) nokuqunjelwa okujwayelekile. Ngokuphikisana nesizinda sobunzima obujwayelekile enqubweni yokuhamba kwamathumbu, isiguli singakhubazeka amathumbu. Ukuhlaselwa kobuhlungu nge-bancary-pancreatitis esekude kunokuqhathaniswa nezinye izindlela zalesi sifo.
Ubuhlungu buvame ukwenziwa endaweni ethile ku-hypochondrium yangakwesokudla (hhayi ngakwesobunxele) futhi ingadlula engalweni yangakwesokudla, emuva emuva, noma igaxa lakwesokunxele.
7. Ungaphatha kanjani
Ukwelashwa kwe-PD kwenziwa ngokuphelele. Injongo eyinhloko yokwelapha ukuqeda isici esacasulayo i-pathological bile Reflux. Kulesi sigaba, izindlela ezisetshenziswayo zokwelapha noma zokuhlinzwa zingasetshenziswa. Ukuqedwa kwembangela yesifo kunciphisa kakhulu ingozi yokuvuselelwa kabusha kwe-pancreatitis kanye nokushintshwa kwe-pathology ibe yifomu elingamahlalakhona. Ingxenye yesibili yokwelapha ihloselwe ama-analgesia, okwandisa isimo sokusebenza kwesibindi, i-gall bladder kanye ne-pancreas.
Izinyathelo zokwelapha i-PD:
ukukhululeka kobuhlungu nokukhululeka kwesimo sesiguli,
ukubuyiselwa kwenqubo yokutholwa kokuthungwa kwe-pancreatic,
ukuvimbela izinqubo ezithathelwanayo ze-pathological,
ukususwa kwe-calculi (uma ikhona),
8. Amanani entengo yokwelashwa
Izindleko zokwelashwa kwe-PD zincike ezicini eziningi - isithombe somtholampilo esivamile sesimo sempilo sesiguli, izinga lokuqhubeka kwesifo sesibili, inkambiso yezinqubo ezidingekayo zokwelashwa. Uma isiguli sihlolwa esikhungweni sikahulumeni, khona-ke izindleko ezinkulu zizofaka ukwelashwa.
Lapho kuqashelwa emitholampilo ekhokhelwayo, izindleko zokuxilonga nokwelapha i-PD zizophakama kaningana. Izindleko ezijwayelekile zokwelapha ngama-ruble angama-8,000.
9. Ukudla: okungaba futhi okungenakuba yikho
Ukuhambisana nokudla kwe-PD kukuvumela ukuthi ufinyelele ekuxolelweni okuzinzile. Imikhiqizo evela ekudleni akufanele ibe nomphumela ololisayo kwizitho zokugaya ukudla. Isisekelo sokudla okuyizisekelo zemigomo yokudla yenombolo 5. Ukudla kwamaphrotheni kufanele kuvame ekudleni. Awukwazi ukudla izitsha ezinamafutha, ezinosawoti, okuthosiwe, okubhemayo nezibunjiweyo. Iziphuzo zotshwala kanye ne-carbonated, amajikijolo nezithelo ezinambitheka omuncu, iklabishi elimhlophe, ama-legamu, amakhowe, ibhotela, ukhilimu omuncu, isikhuphasha seqanda, ikhofi eqinile noma itiye akufakiwe kwimenyu.
Kuyenqatshelwa ukudla i-sorrel, isithombo, isipinashi, ubhanana, izinsuku, ama-cranberry, u-anyanisi, ugalikhi, upelepele wensimbi, isithombo namagilebhisi.
Lokhu kudla okulandelayo kufanele kube khona ekudleni:
Kwi-pancreatitis ebaluleke kakhulu, iziguli kufanele zikhohlwe ngokudla okunamafutha, ukhukhamba omuncu, inyama ebhemayo, izithelo ezimuncu nemifino. isobho lebhisidi nemifino,
inyama enamafutha amancane (inkukhu, inyama yenkomo, inhlanzi),
i-vinaigrette, isaladi yemifino,
ithanga, i-oatmeal, iphalishi le-buckwheat,
ama-apula (okungewona omuncu)
Izilinganiso ezivela amajikijolo amasha nezithelo,
ama-compotes wezithelo omisiwe,
Ngenkathi inyusa i-PD, kuyanconywa ukuzila okwelashwa. Ukudla noma yikuphi ukudla kungadala ukwanda kwezimpawu zenqubo yokuvuvukala. Ukudla okunempilo kubandakanya ukufakwa ekudleni kwamanzi wamaminerali we-alkaline (Borjomi, Essentuki).
Isikhathi sokudla sincike esithombeni somtholampilo sesimo sempilo sesiguli. Kwezinye izimo, imithetho yokudla kumele ilandelwe impilo yonke.
Ukudla kokudla, imenyu
Ukunikezwa kwamandla ne-PSU kusho ukuhambisana nemithetho eminingana ebalulekile. Ukudla kufanele kwenziwe izikhathi ezingama-5-6 ngosuku (umthamo wokukhonza owodwa awudluli kuma-250 g). Lapho upheka, preference kufanele inikezwe izindlela zokwelapha umusi, ukupheka noma ukuhambisa. Inani lama-carbohydrate kwimenyu ancishiswa abe ngu-250 g ngosuku, amanoni - aze afike ku-80 g ngosuku.
Ukuqashelwa ikakhulukazi kukhokhwe ezingeni lamaprotheni ekudleni (umzimba kufanele uthole okungenani i-120 g yalesi sikhathi ngosuku). Izinga lokushisa lokudla akufanele lidlule ama-50 degrees.
I-Oatmeal (obisini luhlanjululwe ngamanzi), itiye eliluhlaza
I-Steam omelet (kusuka kumaprotheni), i-apula ebhakiwe, kissel
Isobho esenziwe ngemifino, i-pasta enama-meatball enhlanzi, umhluzi we-rosehip
Amakhukhi e-Galetny, ushizi we-cottage shizi
Ilayisi ngesigaxa senyama ebilisiwe, itiye
Umhluzi weRosehip noma i-compote yezithelo eyomile
Eminye imithetho yokudla:
imenyu kufanele ibe nezitsha ezilungiselelwe ngokuya ngokwendlela yokupheka,
isikhathi sokudla phakathi kokudla kufanele okungenani sibe ngamahora amathathu,
lapho kudliwa ukudla, kufanele kuhlafunwe kahle (izitsha kufanele zibe nokufana kwama-mousses, iziphandla, amazambane abunjiwe),
ukudla okuphuzwayo akunconyelwanga (udinga ukuphuza uketshezi ihora elilodwa ngemuva kokudla).
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi kubonakaliswa ngokuqina ngokweqile nokuqina.
Imbangela enkulu yezinkinga ze-PD ukuntuleka kokwelashwa okufika ngesikhathi. Inqubo ye-pathological ingavusa ukwakheka kwe-purulent foci, ukwakheka okungahambi kahle, ukwanda okubucayi kwezicubu ze-pancreatic noma ukufa kwabo. Ezinye izingqinamba azihambelani nempilo. Uma ungazinaki izimpawu ze-PD, ingozi yokufa kwesiguli iyanda.
Uhlobo oluyindida lokuvuvukala kwepancreatic ngonyango olungafanele luholela ku-peritonitis.
12. izincomo nesibikezeli
I-BP icasusa ushintsho lwe-pathological olungenakuguqulwa kumanyikwe. Ukuqagela kwalesi sifo kuncike ekuhambeni kwesikhathi nasekwelashweni kokwanele. Uma ukwelashwa kwenziwa ezigabeni zokuqala zokukhula kwe-pathology, khona-ke ubungozi bezinkinga buncane. Izindlela ezisetshenzisiwe ze-PD zinciphisa kakhulu ubude nezinga lempilo.
Imiphumela yokuntuleka kokwelashwa okufika ngesikhathi:
Ukulandela ukudla okuqinile kukho konke impilo,
umuthi wesikhathi eside
ukuvama kakhulu kwenqubo ye-pathological,
ukwelashwa okujwayelekile esibhedlela.
Ngemuva kokulashwa kwe-PD, kuyadingeka ukuthi ubheke lokhu kudla, izincomo zochwepheshe, ukuze ungazicabangeli futhi uthintane nodokotela uma usola ukuthi kukhona okungahambi kahle ohlelweni lokugaya ukudla. Musa ukuyeka ngaphambi kwesikhathi ukwelashwa kwezidakamizwa.
Ngemuva kokuthatha imishanguzo ebekiwe, kufanele kuthathwe ukuhlolwa kwesibili. Ukwephulwa kwerejimeni enconyiwe kuzovusa kakhulu ukuphindaphindwa kwe-PD futhi kwandise nengozi yezinkinga.